Ahitsio ny votoatin'ny votoatin-kevitry Geometry! Andramo ny poezia!
Ho an'ny mpampianatra Tips & Strategies
Ahitsio ny votoatin'ny votoatin-kevitry Geometry! Soraty ny tononkalo!
Poezia amin'ny kilasin'ny Geometry izay tsy mila manamboatra
"Ny matematika madio dia, amin'ny fomba izay, ny poezia ny hevitra lojika." - Albert Einstein.
Rehefa mandray toro-hevitra avy amin'i Albert Einstein, ny mpampianatra matematika dia afaka mandinika ny fomba ahafahan'ny lojika matematika azo atokisana amin'ny tononkalo poezia. Ny sampana tsirairay amin'ny matematika dia manana ny fiteny manokana, ary ny poezia dia ny fandaminana ny teny na ny teny. Ny fanampiana ireo mpianatra hahatakatra ny fiteny akademika amin'ny jeometry dia tena ilaina amin'ny fahatakarana.
Ny mpikaroka sy ny manam-pahaizana sy ny mpanoratra Robert Marzano dia manome tetikady maromaro ahafahana manampy ireo mpianatra amin'ny hevitra lojika nofaritan'i Einstein. Tetikady iray manokana dia mitaky ny mpianatra "hanome famaritana, fanazavana, na ohatra amin'ny teny vaovao." Ity soso-kevitra manan-danja ity izay mety ho azon'ny mpianatra hazavaina dia mifantoka amin'ny hetsika izay mangataka ny mpianatra handefa tantara iray izay mampiditra ny fe-potoana; Ny mpandidy dia afaka misafidy na manazava tantara iray dia amin'ny poezia.
Nahoana no Poety ho an'ny Vocabulary amin'ny Geometry?
Ny poezia dia manampy ireo mpianatra hamindra fo amin'ny voambolana samihafa. Ny voambolana be dia be ao amin'ny sehatry ny sehatry ny geometry dia ny interdisciplinary, ary ny mpianatra dia tokony hahatakatra ny dikan'ny teny maro. Tadiavo ohatra ny fahasamihafana amin'ny dikan'ity teny manaraka ity BASE:
(architecture / geometry) ny fanohanana ambany indrindra ny zavatra rehetra; izay zavatra ijoroany na mipetraka;
Ny singa fototra na zavatra hafa, izay heverina ho ampahany fototra:
(amin'ny baseball) iray amin'ireo zoro efatra amin'ny diamondra;
(matematika) izay manomboka ho laharana voalohany amin'ny logarithmic na rafitra hafa.
Diniho izao ny fomba nampiasana ny teny hoe "fototra" tamin'ny andininy iray izay nahazoana ny Ashlee Pitock voalohany tao amin'ny Yuba College Math / poetry contest 2015 mitondra ny lohateny hoe "Ny Analysis of You and Me":
"Tokony ho hitako ny tahan'ny tahan'ny fototra
ny fahadisoana midadasika misy ny mombamomba anao
Rehefa tsy fantatrao ny namoizako ny fitiavako. "
Ny fampiasana azy amin'ny teny fototra dia afaka mamoaka sary manjavozavo izay mampahatsiahy ny fifandraisana amin'ireo faritra manokana. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fampiasana poezia hampiseho ny dikany isan-karazany dia tetik'asa fampandehanana mahomby hampiasaina amin'ny efitrano fianarana EFL / ESL sy ELL.
Ohatra sasantsasany amin'ny teny Marzano no manasokajy ny maha-zava-dehibe ny fahalalàna ny rafitra (jereo ny lisitra feno)
Poetry as Practice Standard 7
Ny fitsipi-pitenim-pahaizana matematika # 7 dia milaza fa "ireo mpianatra matihanina matihanina dia mikaroka akaiky ny lamina na ny rafitra."
Ny poezia dia matematika. Ohatra, rehefa misy tononkalo iray nokarakaraina ao amina stanzas, dia nalamina ny isam-borona:
quatrain (4 reny)
sestet (andalana 6) (indraindray antsoina hoe "sexe")
septeta (7 lines)
Toy izany koa, ny rhythm na metatra iray amin'ny tononkalo dia niorina amin'ny tarehimarika rhythmika antsoina hoe "tongotra" (na adin-tsoratra amin'ny teny):
iray monja = monometra
tongotra roa = dimetra
telo metatra = trimeter
tongotra efatra = tetrametera
tongotra dimy = pentameter
Misy tononkalo izay mampiasa karazana matematika hafa, toy ny roa (2) voatanisa etsy ambany, ny diamante cinquain ary ny acrostic.
Ohatra momba ny voambolana Jeometria sy ny hevitra ao amin'ny tononkalon'ny mpianatra
Voalohany, ny poezia manoratra dia mamela ny mpianatra hampifandray ny fihetseham-pony / fahatsapana amin'ny voambolana. Misy ahiahy, fanapahan-kevitra, na hatsikana, toy izao manaraka izao (mpanoratra tsy voasoratra anarana) ao amin'ny tranonkala Hello Poetry:
Tena misy ny fitiavana
amin'ny fahatsapana sy ny maha izy azy
fahatokisana, fanajana ary fahatakarana
Faharoa , fohy ny tononkalo, ary ny fahasahiranany dia mamela ny mpampianatra hifandray amin'ny lohahevitra votoaty amin'ny fomba tsy hay hadinoina. Ny tononkalo "Miresaka momba ny Geometry" ao amin'ny tranonkala Hello Poetry: ohatra, fomba mahavariana ny mpianatra iray dia maneho fa afaka manavaka ny hevitry ny maro (halôtika) amin'ny teny boribory izay mety midika hoe: "ny habaka ao anatin'ny andalana roa na telo na Ny fiaramanidina misimisy kokoa avy amin'ny teboka iraisana, na ao anaty fiaramanidina roa misintaka avy amin'ny andalana iombonana "OR dia mety midika hoe" fomba fijery na fomba fijery. "
Miresaka momba ny Geometry.
Ianao no telozoro amin'ny teôria Pythagoreanako.
Ireo faribolana dia mety tsy ho vita mihitsy,
saingy aleoko mazava tsara eo amin'ny zorom-bohinay ary
ireo zavatra hafa rehetra tsy misy dikany.
Aleoko mitovy na farafaharatsiny,
Fahatelo, ny tononkalo dia manampy ireo mpianatra hijery ny fomba ahafahana mampihatra ny fomba amam-panao ao amin'ny sehatra anatiny ao amin'ny fiainany manokana eo amin'ny fiainany, sy ny fiarahamonina, ary izao tontolo izao. Izany dia mihazakazaka lavitra ny zava-misy matematika - mampifandray ny fifandraisana, mamakafaka ny fampahalalam-baovao, ary mamorona fanekena vaovao - izay ahafahan'ireo mpianatra "miditra" lohahevitra iray. Ny tononkalo "Geometry" dia manomboka mampifandray ny fomba fijerin'ny mpianatra iray manerana izao tontolo izao amin'ny fampiasana ny fitenin'ny jeometry (NOTE: manohy ny tononkalon'ny tononkalo Hello)
Manontany tena aho hoe nahoana ny olona no mihevitra ny andalana mifanaraka aminy
fa tsy mbola nihaona izy ireo
fa tsy hifankahita velively izy ireo
Ary izany, tsy ho fantatr'izy ireo velively hoe ahoana no fiheverana azy ho tafaraka.
tsy tsara kokoa ve izany? izao? .....
Oviana sy ny fomba hanoratana ny tononkalo matematika matematika
Ny fanatsarana ny fahatakarana ny mpianatra amin'ny voambolana of geometry dia zava-dehibe, saingy ny fitadiavana ny fotoana ho an'ity karazana ity dia sarotra foana. Ankoatra izany, ny mpianatra rehetra dia mety tsy mila ny fanohanany ny voambolana. Noho izany, ny fomba iray fampiasana tononkalo hanohanana ny voambolana dia ny fanolorana asa mandritra ireo "foibe matematika" maharitra. Ny ivontoerana dia faritra ao am-pianarana izay ahafahan'ny mpianatra manatsara ny fahaiza-manaony na manitatra hevitra. Amin'ity endriky ny fanomezana ity dia misy fitaovana maromaro napetraka eo amin'ny sehatry ny efitrano fianarana ho toy ny tetikady samihafa amin'ny fanoloran-tena ataon'ny mpianatra: ho an'ny famerenana na fampiharana na fampiroboroboana.
Ny poezia "foibe math" amin'ny fampiasana tononkalo fanoratana dia idealy satria afaka manorina miaraka amin'ny torolàlana mazava izy ireo mba hahafahan'ny mpianatra miasa tsy miankina. Ankoatra izany, ireo ivontoerana ireo dia ahafahan'ny mpianatra manana fahafahana hifanerasera amin'ny hafa ary "hifanakalo" amin'ny matematika. Misy ihany koa ny fahafahana mizara ny asany amin'ny fahitana.
Ho an'ny mpampianatra matematika izay mety hanana ahiahy momba ny fampianaran'ny poetika, dia misy tononkalo maromaro, ao anatin'izany ny telo voatanisa etsy ambany, izay tsy mitaky fampianarana momba ireo singa literatiora ( azo inoana fa ampy ny fampianarana azy ireo amin'ny teny anglisy). Ny tononkalo fanoloran-kevitra tsirairay dia manolotra fomba hafa mba ahafahan'ny mpianatra mampitombo ny fahatakarany ny voambolana academique ampiasain'ny rafitra.
Ny mpampianatra matematika koa dia tokony hahafantatra fa ny mpianatra dia afaka manana safidy hizara tantara iray, araka ny soso-kevitr'i Marzano, fanehoan-kevitra malalaka kokoa amin'ny teny. Ny mpampianatra matematika dia tokony hanamarika fa ny tononkalo iray dia milaza fa tsy tantara Tokony hofenoina.
Ny mpampianatra matematika koa dia tokony hanamarika fa ny fampiasana ny formulas ho an'ny tononkalo ao amin'ny kilasin'ny jeometria dia mety hitovitovy amin'ny dingana fanoratana ny math formulas. Raha ny marina, ny poeta Samuel Taylor Coleridge dia mety nandidy ny "mozika matematika" rehefa nanoratra tao amin'ny famaritana azy izy:
"Poezia: teny tsara indrindra amin'ny lamina tsara indrindra."
Ny poezia izay manaraka fehezanteny dia mora ampiasaina ao amin'ny faritra misy sehatr'asa. lambada / GETTY Images
Ny takelaka dia misy tsipika dimy tsy voatsabo. Misy endrika isan-karazany ny cinquain mifototra amin'ny isa misy ny isa na ny teny tsirairay.
Ny tsipika tsirairay dia manana tarehimarika maromaro hita eto ambany:
Andalana 1: 1
Andalana 2: 2
Teny 3: 3
Andalana 4: 4
Andalana 5: 1
Ohatra: Ny famaritana ataon'ny mpianatra ny teny hoe congruent
Manampy ahy ara-jeografika izany
Diamante Poetry Modèles
Afaka mampiasa fampiofanana mba hamoronana tononkalo matematika ny mpianatra ary mifanaraka amin'ny Standard Standard # 7. mustafahacalaki / GETTY Images
Ny rafitry ny tononkalo diamante
Ny tononkalo diamante dia misy tsipika fito mampiasa rafitra napetraka; Ny isa ao anatin'ny tsirairay dia ny rafitra:
Andalana 1: Fanapahana hevitra
Andalana 2: Ny roa mamaritra ny teny momba ny andalana 1
Andalana 3: Telo manao teny momba ny andalana 1
Andalana 4: Fehezanteny fohy momba ny andalana 1, fehezanteny fohy momba ny andalana 7
Andalana 5: Telo manao teny momba ny andalana 7
Andalana 6: Ny roa manoritsoritra ny teny momba ny andalana 7
Andalana 7: Fepetra farany
Ohatra amin'ny famaritana ny toeran'ny mpianatra:
Ny ala rehetra miaraka amin'ny litera ho an'ny andalana iray na b;
Endrika na tononkalo
Ny tononkalo mibaribary na endrika dia ahafahan'ny mpianatra manoratra momba ny hevitry ny jeometry amin'ny endrika endrika jeometria. GETTY Images
Ny tononkalo fanoratana na tononkalo konkrete dia karazan-tononkalo iray izay mamaritra ny zavatra iray ihany fa mamolavola azy ihany koa toy ilay zavatra tondroin'ny tononkalo. Ny votoatiny sy ny endriny dia manampy amin'ny famoronana lozam-po iray matanjaka eo amin'ny sehatry ny poezia.
Amin'ity ohatra manaraka ity, ny Geometry of Love ny tononkalo miorina amin'ny Dave Will, manomboka amin'ny dian-dàlana telo eo ho eo ny andalana roa:
Lalana roa no manasongadina toe-javatra iray tsy azo antoka.
Amin'ny fomba mazava tsara, ny tononkalo dia "manomboka" hatramin'ny farany:
Indraindray dia andalana roa no mety hahitana ny faran'ny farany ary ny endriny mba hamoronana faribolana iray.
Ireo tononkalo acrostic dia fomba lehibe handinihana ny teny voambolana. Westend61 / GETTY Images
Ny tononkalo acrostic dia mampiasa ny litera amin'ny teny iray hanombohana ny andalana tsirairay amin'ny tononkalo. Ny andalana rehetra ao amin'ilay tononkalo dia mifandray na mamaritra ny lohahevitra fototra.
Ao amin'io acrostic io dia ny teny median no lohatenin'ny tononkalo. Rehefa avy nosoratana am-pahamendrehana ireo taratasy misy ny lohateny, ny andalana tsirairay amin'ny tononkalo dia manomboka amin'ny taratasy mifanaraka amin'ilay lohateny. Misy teny, fehezanteny na fehezan-teny azo soratana eo amin'ny tsipika. Ny tononkalo dia tsy maintsy manondro ny teny, fa tsy ny andohalan'ny teny izay mifanentana amin'ny taratasy.
Di vide segment
N ew and congruent
Ny fampahafantarana fanampiny momba ny fifandraisana misimisy ihany dia hita ao amin'ny lahatsoratr'ilay tononkalo matematikan'ny mpampianatra matematika 94 (Mey 2001): http://www-tc.pbs.org/teacherline/courses/rdla230/docs/4_mt_05_01p.342-47 .pdf
Ahoana no ahafahan'i John Lewis 'Trilogy ny Martsa mba hampianatra ireo mpianatra momba ny zo sivily
Inona no ataon'ny mpampianatra ivelan'ny efitrano fianarana raha tsy misy olona mitady
Ahoana no ahafahan'ny fanamafisam-peo manatsara ny fampivoarana
Andraso ny fotoana sy ny fanabeazana
Fomba 5 hampiasana ny fialan-tsasatra sy ny fandinihana ny fanaovana fianarana
Tetikasa fikarakarana mpampiofana
Famoriana asa any an-trano
Alefaso ny lalao Basketball Review
Toro-hevitra momba ny fitantanana ny efitrano fianarana ho an'ny mpampianatra
Torohevitra hanapotehana ny fanoratana ny asa fanoratana
Tetikasa enina isan'andro tokony hampianarin'ny mpampianatra rehetra
Malcom X any Mecca
Ny dikany sy ny hevitry ny nofy mahazatra
Ireo karazam-pitaka samihafa amin'ny Golf sy ny dikany hafa amin'ny fe-potoana
Betsaka ny Pop-up Books ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe
Famaritana ny Kolontsaina Consumerista
Kolontsaina Dongson: Age bronze any atsimo atsinanana
Tokony hovakian'ny Kristianina ve ny "Harry Potter?"
Paris, Prince Prince
Fantaro ny teny frantsay Le Sillage
Famelabelaran-kevitra malaza avy amin'ireo filoham-pirenena Amerikana
Ny Taom-pianarana Nandritra ny fahazazana mahazatra
Consonance (feo feo)
Ahoana ny fomba hananganana afo mavo na volamena
Mike Reasor, ilay mpilalao PGA Tour izay nosoratany 93-Over Par
Ampiasao ny Text na ny tarehintsoratra lehibe na kely kokoa eo amin'ny sarinao
State State GPA, SAT and ACT Data
Ady amin'ny Iraq
10 Hip-Hop Albums Tokony ho an'ny tsirairay ny manana